VIRTUAL CURRENCY EXCHANGE LICENSE Japan | JAPAN တွင် Virtual Currency Exchange Provider License ကို JAPAN တွင်ရယူပါ။ Virtual Currency Exchange Provider License ကို JAPAN တွင်မည်သို့ရယူရမည်၊ Virtual Currency Exchange Provider License ကို JAPAN တွင်ရယူပါ။ Virt မည်သို့ရမည်နည်း။
ၾသစေတးလ် 61390699309 +
Forex & Securities မှအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်တည်နေရာများ
Securities License လိုင်စင်ရောင်းဝယ်ခြင်း BAHAMAS Forex လိုင်စင်
ဘေလီဇ် Forex လိုင်စင်
ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများ Forex လိုင်စင် - BVI
ဘူဂေးရီးယား Forex လိုင်စင်
Cayman Islands Securities Investment Business လိုင်စင်
Forex လိုင်စင် CYPRUS FX လိုင်စင်
ဆိုက်ပရပ်စ် Forex လိုင်စင်
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား3| Leveraged နိုင်ငံခြားသုံးကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်
Mauritius ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် (GBL)
နယူးဇီလန် Forex လိုင်စင်>
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines Forex ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Forex လိုင်စင်တောင်အာဖရိက FX လိုင်စင်
Securities License မှာ Vanuatu ကားရောင်းဝယ်ရေး
လောင်းကစားလိုင်စင် Alderne နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်
COSTA RICA လောင်းကစားလိုင်စင်နှင့်လောင်းကစားကုမ္ပဏီ
Isle of Man လောင်းကစားလိုင်စင်နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်
MALTA လောင်းကစားလိုင်စင်နှင့် Maltese အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်
ICO နှင့် Crypto Setups တည်နေရာများ
Cryptocurrency လိုင်စင် ESTONIA Cryptocurrency Exchange Exchange
ဂျီဘရောလ်ထွန်း Ledger နည်းပညာပေးသူလိုင်စင်
ESTONIA ရှိ ICO ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် Estonian ICO လိုင်စင်
virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင် JAPAN
ကန ဦး ဒင်္ဂါးပြားရောင်းဝယ်ရန်လိုင်စင် LABUAN - Token (ICO)
Cryptocurrency လိုင်စင် SINGAPORE Cryptocurrency Exchange Exchange
Cryptocurrency လိုင်စင် SWITZERLAND Cryptocurrency Exchange Exchange လိုင်စင်
Crypto Exchange ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းယူကေ Cryptocurrency
Bahamas ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ PSP လိုင်စင်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအသေးစား PSP လိုင်စင်
ဂျော်ဂျီယာငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူခွင့်ပြုချက် (PSP)
Mauritius ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် (GBL), PIS
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Grenadines အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်
အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင် BULGARIA ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်
Securities Investment Fund လိုင်စင် CAYMAN ISLANDS Securities Licensing
Securities Investment Fund လိုင်စင် CYPRUS Securities Licensing
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9(ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု) လိုင်စင် - ဟောင်ကောင်
ဆွစ်ဇာလန်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှု (ARIF မှတ်ပုံတင်ခြင်း)
Open Offshore Bank Account အာဖရိကတည်နေရာများ
Standard Bank Mauritius လီမိတက်
Mauritius fintech ဘဏ်
စင်္ကာပူ Standard Chartered ဘဏ်
OCBC Wing ဟန်ဟောင်ကောင်ဘဏ်
Standard Chartered ဟောင်ကောင်လီမိတက်
Hang Seng ဘဏ်
Standard Chartered ဘဏ် (ဗီယက်နမ်) LTD
HSBC Bank (ဗီယက်နမ်) လီမိတက်
Open Offshore Bank Account ဥရောပတည်နေရာများ
Credit Suisse ဘဏ်
VP ဘဏ်ဆွစ်ဇာလန်, Ltd
DSBC ဘဏ္Europeာရေးဥရောပ UAB
Nevis International ၏ဘဏ်
Offshore Bank Account ဖွင့်ပါ
Al Salam ဘဏ်
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု NBD ဘဏ်
Alabama Account ဖွင့်ပါ
California Account ဖွင့်ပါ
Georgia Account ဖွင့်ပါ
ဘဏ်စာရင်း Missouri ကိုဖွင့်ပါ
ဘဏ်အကောင့် Montana ကိုဖွင့်ပါ
New Hampshire တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပါ New Mexico
ဘဏ်အကောင့်ကို New York ဖွင့်ပါ
North Dakota ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ပါ
Rhode Island ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပါ
ဘဏ်အကောင့် Vermont ကိုဖွင့်
စာရင်းပံ့ပိုး Virtual ဘဏ်များ
Deutsche Handels ဘဏ်
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအာမေးနီးယား - LLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Liechtenstein - AG
Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆွစ်ဇာလန် - LLC
ဆွစ်ဇာလန် - ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - စတော့အိတ်ကော်ပိုရေးရှင်း
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုက်ပရပ်စ် - SLLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအက်စ်တိုးနီးယား - LLC - OU
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဂျာမနီ - Mini GmbH
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန် - PLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလူဇင်ဘတ် - Soparfi
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Malta - LLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း - LLP
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း UK - Pvt LTD
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း UK - Public LTD
ကော့စတာရီကာ - SRL ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Bahamas - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဘေလီဇ် - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဘီလီဇ် - LLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI - IBC
Cayman Islands - LLC ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အစုရှယ်ယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကေမန်ကျွန်းများ - လီမိတက်
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Dominica - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းပနားမား - နေထိုင်သူမဟုတ်ပါ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်ကစ် - NBCO
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Saint Kitts - LLC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်လူစီယာ - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအန်ဂူလာ - IBC
အစုရှယ်ယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဂျီဘရောလ် - Pvt LTD
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဗနူတူ - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမာရှယ်ကျွန်းများ - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆာမိုအာ - IBC
Seychelles မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - IBC
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများ - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - IBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဒူဘိုင်း - ဒေသခံကုမ္ပဏီ
ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Mauritius - GBC
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဟောင်ကောင် - လီမိတက်
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဟောင်ကောင် - LTD အာမခံ
Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစင်ကာပူ - PLC
Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစင်ကာပူ - Pvt LTD
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးဝဲ - LLC & CORP
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Nevada - LLC & CORP
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနယူးမက္ကစီကို - LLC & CORP
Wyoming - ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - LLC & CORP
Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင် - ဂျပန်နိုင်ငံမှ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုလျှောက်ထားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သော Japan's Virtual Currency Exchange Provider License ကိုသင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားသည်။
● Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ။
● Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ချထားပါ။
● Virtual Currency Exchange ပေးသူလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း။
● Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်ကြေး။
● Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ကဂျပန်ကိုကုန်ကျတယ်။
●ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License အတွက်လိုင်စင်ရယူခြင်း။
● Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ။
● Virtual Currency Exchange Provider License ကိုအကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ။
● Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
ဂျပန်အတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီသည်၊ ဂျပန်အတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရရှိရန်၊ ဂျပန်အတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ကိုရယူရန်၊ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးကိုရယူသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် Virtual Currency Exchange Exchange Provider လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီပေးသော Japan အတွက်ပေးသူလိုင်စင်သည်ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့၊ ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အကြံပေးများ၊ ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်ရရှေ့နေများကထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်အပါအ ၀ င်ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘို့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုကြိုတင်ရယူထားခြင်း။
We also provide information for Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, how to get Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, also known as, how to obtain Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, apply for Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, obtaining Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License consultants for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License advisors for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License lawyers for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License services for Japan, law firm for Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License costs for Japan, Virtual Currency Exchange Provider License fees for Japan, cost for process of Virtual Currency Exchange Provider License in Japan, procedure to obtain Virtual Currency Exchange Provider License for Japan, Cryptocurrency License for Japan, how to get Cryptocurrency License for Japan, also known as, how to obtain Cryptocurrency License for Japan, apply for Cryptocurrency License for Japan, obtaining Cryptocurrency License for Japan, Cryptocurrency License consultants for Japan, Cryptocurrency License advisors for Japan, Cryptocurrency License lawyers for Japan, Cryptocurrency License services for Japan, law firm for Cryptocurrency License for Japan, Cryptocurrency License costs for Japan, Cryptocurrency License fees for Japan, cost for process of Cryptocurrency License in Japan, procedure to obtain Cryptocurrency License for Japan , cryptocurrency exchange license for Japan, how to get cryptocurrency exchange license for Japan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange license for Japan, apply for cryptocurrency exchange license for Japan, obtaining cryptocurrency exchange license for Japan, cryptocurrency exchange license consultants for Japan, cryptocurrency exchange license advisors for Japan, cryptocurrency exchange license lawyers for Japan, cryptocurrency exchange license services for Japan, law firm for cryptocurrency exchange license for Japan, cryptocurrency exchange license costs for Japan, cryptocurrency exchange license fees for Japan, cost for process of cryptocurrency exchange license in Japan, procedure to obtain cryptocurrency exchange license for Japan , crypto exchange license for Japan, how to get crypto exchange license for Japan, also known as, how to obtain crypto exchange license for Japan, apply for crypto exchange license for Japan, obtaining crypto exchange license for Japan, crypto exchange license consultants for Japan, crypto exchange license advisors for Japan, crypto exchange license lawyers for Japan, crypto exchange license services for Japan, law firm for crypto exchange license for Japan, crypto exchange license costs for Japan, crypto exchange license fees for Japan, cost for process of crypto exchange license in Japan, procedure to obtain crypto exchange license for Japan , crypto license for Japan, how to get crypto license for Japan, also known as, how to obtain crypto license for Japan, apply for crypto license for Japan, obtaining crypto license for Japan, crypto license consultants for Japan, crypto license advisors for Japan, crypto license lawyers for Japan, crypto license services for Japan, law firm for crypto license for Japan, crypto license costs for Japan, crypto license fees for Japan, cost for process of crypto license in Japan, procedure to obtain crypto license for Japan , blockchain license for Japan, how to get blockchain license for Japan, also known as, how to obtain blockchain license for Japan, apply for blockchain license for Japan, obtaining blockchain license for Japan, blockchain license consultants for Japan, blockchain license advisors for Japan, blockchain license lawyers for Japan, blockchain license services for Japan, law firm for blockchain license for Japan, blockchain license costs for Japan, blockchain license fees for Japan, cost for process of blockchain license in Japan, procedure to obtain blockchain license for Japan , cryptocurrency exchange for Japan, how to get cryptocurrency exchange for Japan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange for Japan, apply for cryptocurrency exchange for Japan, obtaining cryptocurrency exchange for Japan, cryptocurrency exchange consultants for Japan, cryptocurrency exchange advisors for Japan, cryptocurrency exchange lawyers for Japan, cryptocurrency exchange services for Japan, law firm for cryptocurrency exchange for Japan, cryptocurrency exchange costs for Japan, cryptocurrency exchange fees for Japan, cost for process of cryptocurrency exchange in Japan, procedure to obtain cryptocurrency exchange for Japan , digital asset license for Japan, how to get digital asset license for Japan, also known as, how to obtain digital asset license for Japan, apply for digital asset license for Japan, obtaining digital asset license for Japan, digital asset license consultants for Japan, digital asset license advisors for Japan, digital asset license lawyers for Japan, digital asset license services for Japan, law firm for digital asset license for Japan, digital asset license costs for Japan, digital asset license fees for Japan, cost for process of digital asset license in Japan, procedure to obtain digital asset license for Japan , ICO License for Japan, how to get ICO License for Japan, also known as, how to obtain ICO License for Japan, apply for ICO License for Japan, obtaining ICO License for Japan, ICO License consultants for Japan, ICO License advisors for Japan, ICO License lawyers for Japan, ICO License services for Japan, law firm for ICO License for Japan, ICO License costs for Japan, ICO License fees for Japan, cost for process of ICO License in Japan, procedure to obtain ICO License for Japan .
ဂျပန်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အတူဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ။
Virtual Currency Exchange Provider License ကိုလျှောက်ထားပါ ဆက်သွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Virtual Currency Exchange Provider License ကိုပေးသော Japan အတွက်နိဒါန်း
ပြင်ဆင်ထားသောငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်Aprilပြီ ၁ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Virtual Currency Exchange ပေးသူများမှာထိုကာလတွင်ဂျပန်ဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအေဂျင်စီနှင့်ဖိုင်တွဲရန်လိုအပ်သည်။
ဂျပန်သည်ကျွန်းပေါင်းများစွာနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်းတွင်ဟောင်ရှူး၊ ဟော့ကိုင်းဒို၊ ကျူရှူးနှင့်ရှီကိုကုကျွန်းတို့မှာအကြီးဆုံးလေးကျွန်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်၏အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းများမှာကိုရီးယား၊ ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဂျပန်ပင်လယ်သည်အာရှမြေအားဂျပန်ကျွန်းစုနှင့်သီးခြားခွဲထားသည်။
ဂျပန်၏zoneရိယာသည်ဂျာမနီနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတို့နှင့်တူသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်စွန်းဆုံးကျွန်းများသည်မီလန် (သို့) Portland ကဲ့သို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွင်တည်ရှိပြီးသူမ၏တောင်ဘက်စွန်းဆုံးကျွန်းများမှာဘဟားမားကျွန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်သစ်တောများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ၏။ ဂျပန်သည်နိုင်ငံရေးအရဖွဲ့စည်းထားသည့်ခရိုင် ၈ ခုနှင့်စီရင်စု ၄၇ ခုရှိသည်။
ဂျပန်လူ ဦး ရေမှာ ၁၂၅၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊ ဂျပန်မဟုတ်သည့်လူ ဦး ရေ၏အများစုမှာကိုရီးယားကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းမြေကွက်ငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့်ဒေသတစ်ခုတွင်တည်ရှိသောကြောင့်နိုင်ငံသည်ပုံမှန်ငလျင်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ အလားတူရှင်းပြချက်အရဂျပန်တွင်မီးတောင်များနှင့်ထူးခြားသောသဘာဝရေအောင်းလွှာများရှိသည်။ ဂျပန်၏ကျော်ကြားသောချော်ရည်များဖြစ်သည့်ချော်ရည်များနှင့်အထင်ရှားဆုံးသောတောင်သည် Mt.Fuji ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောမြောက် - တောင်တိုးချဲ့မှုကြောင့်ဒေသအမျိုးမျိုးတွင်လေထုသည်ပြင်းထန်စွာပြောင်းလဲနေသည်။ တိုကျိုအပါအ ၀ င်သိသာထင်ရှားသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများရှိလေထုသည်အပူပိုင်းဒေသမှနူးညံ့ပြီးရာသီဥတုလေးမျိုးပါဝင်သည်။ ယခုနှစ်အေးခဲသည့်အချိန်သည်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်ပူပြင်းပြီးစိုစွတ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီတွင်တောက်ပသောရာသီရှိပြီးမိုးရာသီတွင်နိုင်ငံ၏မုန်တိုင်းများကိုတိုက်ခတ်သည်။ မြောက်ပိုင်းဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းနှင့်ဂျပန်ပင်လယ်ကမ်းခြေ၏လေထုသည်အေးသည်။ နှင်းအလွန်များပြားလာသည်။ အိုကီနာဝါတွင် ထပ်မံ၍ ဇန်နဝါရီလ၏ပျမ်းမျှအပူသည် ၁၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ တိုကျို၊ ကျိုတိုနှင့်ဟီရိုရှီးမားမြို့များအကြား urban ည့်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏ခရီးသွားလေ့ကျင့်ခန်းများကိုနိုင်ငံ၏မြို့ပြဇုန်များသို့အတတ်နိုင်ဆုံးသွားနိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လူများစွာသည်ဂျပန်သည်ကြီးမားပြီးလူ ဦး ရေထူထပ်သော megacity တစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောခိုင်မာသည့်လွဲမှားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုဖြင့်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ အမှန်တရားအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ၆၆% ကျော်သည်သစ်တောတောင်တန်းများနှင့်တောင်စောင်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားပြီး ၁၀% အောက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ခေတ်မီမြေယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
ဂျပန်ကျွန်းစုသည်မြောက်မှတောင်သို့ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ နီးပါးကျယ်ပြန့်သည်။ guests ည့်သည်များသည်ဟော့ကိုင်းဒိုးမှသမုဒ္ဒရာများရှိရေပေါ်ရေပြင်မှအိုကီနာဝါရှိဒီရေတောတောများသို့ s ည့်သည်များမြင်သာသည့်ကျယ်ပြန့်သောမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အလယ်ပိုင်းတွင်ကြီးမားသောမီးတောင်များ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းများနှင့်မျောက်များ၊ ဝံများ၊ သမင်၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာပန်းခြံများနှင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများကဲ့သို့တိကျသောပုံမှန်ခမ်းနားထည်ဝါမှုများကိုပြသထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မီးတောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကြမ်းတမ်းသောအတွင်းပိုင်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကား statures တောင်တက်အဖွင့်တွေအများကြီးနှင့်လွှမ်းခြုံဒေသများကြည့်ဖို့ရာမှလှပသောအမြင်များကိုပေး။ ဂျပန်လူမျိုးတစ် ဦး ချင်းစီသည်မြင်ကွင်း၏ထူးချွန်မှုကိုအလွန်လေးစားကြသည်။ ရှေးဟောင်းခေတ်မှရှင်တိုဘာသာတရားကတောင်များ၊ ကက်စကိတ်များနှင့်သစ်တောများကဲ့သို့သောဘုံပေါ်လွင်ချက်များသည်သူတို့၏စိတ်ဓာတ်များနှင့် ၀ ိညာဉ်များနှင့်တူသည်ဟုဆိုသည်။
ဂျပန်အများစုကိုပွင့်လင်းသောနိုင်ငံဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာလူ ၁၀၀ သန်းကျော်သည်အထူးသဖြင့်နေရာအနည်းငယ်သာတွင်နေထိုင်သောကြောင့်သဘာဝကပင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသော်လည်းလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြားလူ့လေ့ကျင့်ခန်းများသည်သာမာန်နယ်မြေများကိုထိခိုက်စေသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိမျိုးစိတ် ၁၃၆ ခုခန့်ကိုအန္တရာယ်ပြုသည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ပူနွေးသော Tsushima စီးဆင်းမှုသည်တောင်ဘက်မှဂျပန်ပင်လယ်ထဲသို့စီး ဝင်၍ ၎င်းတွင်အေးခဲသောဆုံတွေ့မှုနှင့်မြောက်ဘက်မှစီးဆင်းသည်။ ရေရောစပ်မှုကြောင့်ဂျပန်ပတ် ၀ န်းကျင်သမုဒ္ဒရာသည်ငါးများနှင့်အခြားသမုဒ္ဒရာများတွင်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသည်။ ဂျပန်တွေကသူတို့စိတ်ဓာတ်ကျဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသူများ၊ အထူးသဖြင့်အုပ်ထိန်းသူများနှင့်မန်နေဂျာများကိုလေးစားရန်ကလေးများကိုညွှန်ကြားထားသည်။ သူတို့မိသားစုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်သတ္တိရှိရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်ရန်နှင့်မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင်မည်သို့ပုံဖော်ကြသည်။
ဂျပန်အစားအစာသည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများမှအစားအစာများနှင့်လုံးဝခြားနားသည်။ ဆန်၊ ငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၀ ယ်သော်လည်းအသားအနည်းငယ်သာရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားသူများထက် ပို၍ ကြာရှည်သည်။ ဂျပန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ် ဦး တည်းသောလူမျိုးဖြစ်ပြီးအာဏာရှိသောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည် အကြီးအကဲများတွင်စစ်မှန်သောအင်အားမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်နိုင်ငံ၏ဓလေ့ထုံးစံနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ်လေးစားခံရဆဲဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဂျပန်စီးပွားရေးကိုနှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဂျပန်ပြည်သူလူထု၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်သိသိသာသာတိုးတက်မှုကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်လာသည်။ ဂျပန်၏အဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ လူတို့သည်မူလကဂျပန်သို့နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ခန့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကအဓိကကျွန်းများသည်ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့်ကိုရီးယားတို့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပြီးခြောက်သွေ့သောကုန်းမြေများကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ Jomon ယဉ်ကျေးမှုဟုခေါ်သောမူလတန်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ခန့်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အလားတူအချိန်လောက်တွင် Ainu လူထုသည်ဆိုက်ဘေးရီးယားမှလှေဖြင့်ထွက်လာသည်။
Jomon နှင့် Ainu တို့သည်စက်ရုံများကိုလိုက်ဖမ်းခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘီစီ ၃၀၀ တွင် Yayoi သည်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှ Honshu ကျွန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ပါရမီရှင်များ၊ ပြည့်လျှံသောစပါးစိုက်ခင်းများတွင်စပါးကိုစတင်ဖွံ့ဖြိုးသူများ၊
ဘီစီ ၆၆၀ တွင်ဂျပန်၏ပထမဆုံးအုပ်စိုးသူ Jimmu Tenno သည်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ Shoguns ဟုခေါ်သောစစ်အုပ်စိုးရှင်များသည်အင်အားကြီးမားသောအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်အေဒီ ၁၂ ရာစုအထိဂျပန်တို့သည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်များကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။
ဥရောပသားများသည် ၁၅၄၃ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်၌ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးသေနတ်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ၁၆၃၅ ခုနှစ်တွင် Shogun ဆုံးဖြတ်ချက်ကဂျပန်ကိုပြင်ပ၌ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးဂျပန်ကိုနိုင်ငံခြားသို့သွားရန်တားမြစ်ခဲ့သည်။ ဤသီးခြားစီသည်အနှစ် ၂၀၀ ကျော်ခံရပ်ခဲ့သည်။ 1543 ခုနှစ်တွင် shoguns ဖြုတ်ချခြင်းနှင့်အကြီးအကဲများပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ဂျပန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ခေတ်မီသောကာလဖြစ်သည်။
ပထမကမ္ဘာစစ် (၁၉၁၄-၁၉၁၇) အတွင်းဂျပန်သည် US ကိုတိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင်ဂျပန်သည်ဟာဝိုင်ယီရှိပုလဲဆိပ်ကမ်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေတပ်အင်အားစုကိုဗုံးကြဲခဲ့ပြီးအမေရိကန်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၅ အထိဂျပန်စစ်တပ်အကြီးအကဲများသည်အမေရိကန်နှင့်ထပ်မံဆက်စပ်သည့်အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅၊ သြဂုတ်လတွင်အမေရိကန်သည်ဂျပန်မြို့တော်ဟီရိုရှီးမားနှင့်နာဂစ်စကီတို့၌နျူကလီးယားဗုံးများကျဆင်းခဲ့ပြီးလူပေါင်း ၁၁၅၀၀၀ ခန့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဂျပန်သည်အရှုံးပေးလိုက်သည်။
ဂျပန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည်များ
Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်၊ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်ရယူ၊ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ဂျပန်ရယူ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဂျပန်, Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်, ဂျပန်, cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ရရှိမည်, ဂျပန် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ရရှိ, cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, လျှောက်လွှာ, cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, ကုန်ကျစရိတ်၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ဂျပန်, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်ရယူ, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်လွှာ, crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, crypto ၏ကုန်ကျစရိတ် o လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ဂျပန်, crypto လိုင်စင်ဂျပန်, crypto လိုင်စင်ဂျပန်ရယူ, crypto လိုင်စင်ဂျပန်ရယူ, crypto လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, crypto လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်လွှာ, crypto လိုင်စင်ဂျပန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, crypto လိုင်စင်ဂျပန်၏ကုန်ကျစရိတ်, blockchain လိုင်စင်ဂျပန်, blockchain လိုင်စင်ဂျပန်ရယူ , blockchain လိုင်စင်ဂျပန်ရယူပါ, blockchain လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား blockchain လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်လွှာ, blockchain လိုင်စင်ဂျပန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, blockchain လိုင်စင်ဂျပန်၏ကုန်ကျစရိတ်, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်ရယူ, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်ရ, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်လျှောက်ထားများအတွက်လျှောက်လွှာ cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, cryptocurrency လဲလှယ်ဂျပန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ကိုရယူ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Japan လိုင်စင်၊ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဂျပန် , ICO လိုင်စင်ဂျပန်, ICO လိုင်စင်ဂျပန်ကိုရယူ, ICO လိုင်စင်ဂျပန်ကိုရယူ, ICO လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်ထား, ICO လိုင်စင်ဂျပန်လျှောက်လွှာ, ICO လိုင်စင်ဂျပန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ICO လိုင်စင်ဂျပန်၏ကုန်ကျစရိတ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုဘယ်လိုကူညီသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျပန်အသင်းအတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်ရန်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ကိုမရယူမှီသေချာစွာလုံ့လဝီရိယရှိရှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။
ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider License ရရှိရန်လျှောက်လွှာနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုလျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အာဏာပိုင်များနှင့်နိဂုံးချုပ်သည်။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် Virtual Currency Exchange Provider License Japan ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - 8 ပတ်ကြာသည်
လိုင်စင်လျှောက်လွှာ - ၆ လအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်
အနည်းဆုံးအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက် - JPY10 000 000 000 (ခန့်မှန်းခြေယူ။ ယူ။ 75000) + နိမ့်ဆုံးမှတ်ပုံတင်အခွန် JPY 150 (မြို့တော်၏ 000 ရာခိုင်နှုန်း)
သတိပြုသင့်သည်မှာလက်ရှိရရှိနိုင်သည့် cryptocurrencies သည်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေအောက်ရှိ Virtual ငွေကြေး၏ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်ရောက်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အက်ဥပဒေအရဖော်ပြထားသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်စီးပွားရေးတန်ဖိုးရှိသောငွေကြေး (ဥပမာ - Bitcoin, Litecoin, Ether စသည်);
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းမပြုနိုင်သော၊ ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ငွေကြေးဖြင့်သာလဲလှယ်နိုင်သည့်အကြွေစေ့ / တိုကင်သည်ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား virtual ငွေကြေးအဖြစ်မရှုမြင်နိုင်ပါ။ Fiat ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောတူရိယာများကိုလည်း virtual ငွေကြေးအဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။ အချို့သောတူရိယာများသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားလုံးမှကင်းလွတ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်စာရင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းကကိုင်တွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့် virtual ငွေကြေးဖော်ပြချက်များရှိရမည်။
အက်ဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Virtual Currency Exchange Business ၏ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းမကျရောက်သောကတိကဝတ်များဥပမာမှာ -
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းသော Virtual ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုဆောင်ရွက်သောသဘာဝသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊
Cryptocurrency Mining တွင်ပါဝင်သောကုမ္ပဏီများ၊
software developer များ၊
virtual ငွေကြေးရောင်းချမှုသို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှုတွင်မပါ ၀ င်သောပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ။
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ထုတ်ပေးသူ၏အကျိုးကျေးဇူးများ -
အခွန်နှစ်ဆကောက်ခံခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ် ၉၆ ခု၊
ဘာကြောင့်ဂျပန်ကို Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသောအခါ၊ ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်၊ ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသောလိုင်စင်နှင့်ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသောလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားမှုအားထုတ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သင်၏ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်ရရှိရန်အထောက်အပံ့။ “ သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေထက်ပိုအရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆံရေးကိုရရှိသောကြောင့်ငွေသည်အလိုအလျောက်လိုက်နာသည်။ အလွန်အရေးကြီးသည်, ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောထပ်ဖောက်သည်များနှင့်ရည်ညွှန်းရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။ နံပါတ် ၁ ဖြစ်သောကြောင့် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။ နံပါတ် ၁ ဖြစ်သောကြောင့် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိအနိမ့်ဆုံး Virtual Currency Exchange Provider License ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်မှာ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်၊ ဂျပန်ရှိ Virtual Currency Exchange Provider License၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ crypto လဲလှယ်မှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိုင်စင်၊ crypto လဲလှယ်မှုအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်မှာ crypto လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ crypto လိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ, crypto အတွက်စျေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ ဂျပန်တွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်ဈေးပေါသောရှေ့နေများ၊ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ ဂျပန်တွင်လိုင်စင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်ဥပဒေအရအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ကုမ္ပဏီများ, ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ။
လိုင်စင် ယခု Apply!
ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်ချခြင်းသည်အထူးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိရန်လိုအပ် - ဂျပန်နိုင်ငံ၏ငွေလဲလှယ်မှုပေးသူလိုင်စင်အတွက်ထူးခြားချက်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များ
အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး (လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံသားကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ)
အနည်းဆုံးနေထိုင်သူဒါရိုက်တာတစ် ဦး (ဒေသခံရုံးကိုယ်စားလှယ်)
အနည်းဆုံးဒေသခံ ၁ ယောက်လိုက်နာရမည့်အရာရှိ (ကုမ္ပဏီ၏ရုံး၏ရုံးတွင်းဒေသခံလိုက်နာရမည့်အရာရှိနှင့်အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်သူ)
၃၇.၀၅% Corporate ဝင်ငွေခွန် (Corporate Inhabitant Tax အပါအ ၀ င်)
ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားများ - အမြတ်အပေါ် ၁၅%၊ ကြွေးမြီအပေါ် ၂၀%၊ မူပိုင်ခွင့်အပေါ် ၂၀%
၈% စားသုံးမှုအခွန် (~ VAT)
စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ် - ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္statementsာရေးရှင်းတမ်းများကိုနှစ်စဉ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်
အတွင်းရေးမှူး - လိုအပ်လိမ့်မည်
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် - မလိုအပ်ပါ
ကုမ္ပဏီ၏အမည်အား“ Kabushiki-Kaisha” (ဂျပန်အက္ခရာများဖြင့်) ဖြင့်လိုက်နာရမည်။
ကန့်သတ်ထားသောကုမ္ပဏီ၏အမည်ဆက်သွယ်မှု - ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အေဂျင်စီများ၏အမည်များ
ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏အမည်သည်ကောင်းမွန်သောကျင့် ၀ တ်နှင့်ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့တရား ၀ င်ပုံစံ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အထင်မမှားပါ။
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
FSA / ဒေသခံဘဏ္Bureauာရေးဗျူရိုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်
ဂျပန်၏ Virtual Currency Exchange Provider License ရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
လိုင်စင်ရရန်အတွက် Offshorelicense သည်လိုအပ်သောလျှောက်လွှာပုံစံများကိုဖြည့်ပြီးဖြိုဖျက်သောကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းဝယ်ယူလိမ့်မည်။
တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး စီ၏) ခွင့်ပြုချက်မိတ္တူ။
နေထိုင်ခွင့်လိပ်စာအထောက်အထားကိုထောက်ခံစာမိတ္တူ (ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ချင်း၏အသုံး ၀ င်သည့်ငွေပမာဏ။ )
Certified Bank (ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ချင်းစီ၏) ကိုကိုးကားပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံစာ ၂ ခု (ဒါရိုက်တာနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး စီ၏)
လျှောက်ထားသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် CV ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ဒါရိုက်တာနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး စီ၏) ။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးဒီပလိုမာများ၏ notarized မိတ္တူ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် / ဘဏ္returnာရေးပြန်လာ၏မိတ္တူ
ကောင်းသောရပ်တည်ချက်၏ Apostilled လက်မှတ်
ကုမ္ပဏီ / စီးပွားရေးအတွက်
စတင်လုပ်ကိုင်စဉ်မှသုံးနှစ်တာဘဏ္profitာရေးနှစ်အတွင်းအမြတ်နှင့်အရှုံးဖြစ်နိုင်ခြေအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်စီးပွားရေးပုံစံ
လက်စွဲများ - အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများ၊ ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်စည်းမျဉ်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကာအကွယ်အစီအမံများ၊ ငွေသားထုတ်ယူသည့်စနစ်၊ သုံးစွဲသူများမှရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသော virtual ငွေကြေးများ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်
ကမ်းလှမ်းထားသော virtual ငွေကြေးစာရင်းနှင့်ဖော်ပြချက်
ကို virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ကုမ္ပဏီ၏ကွပ်မျက်များအတွက်စာချုပ်ပုံစံ
ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကော်မရှင်မှအပိုဆောင်းလုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ စာရွက်စာတမ်းများသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မဟုတ်ပါက notarized translation ကိုပေးရမည်။
၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်သည်ဖောက်သည်နှင့်မဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံရန် - မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ID လိပ်စာသို့စာတစ်စောင်ပို့ရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကိုအတည်ပြုရန်အချိန်မရွေးနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကို FSA / ဒေသဆိုင်ရာဘဏ္Bureauာရေးဌာနသို့မဟုတ်ဒေသန္တရဘဏ်တို့မှတောင်းဆိုနိုင်သည်။
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကို Virtual Currency Exchange ပေးသူလိုင်စင်၊ ဂျပန်၌အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှု Virtual Currency Exchange Exchange Provider လိုင်စင်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော CLIENTS ကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ဂျပန်အတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုအောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစား (များ) သို့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်မဟုတ်ပါ။
Virtual Currency Exchange Supplier လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider အတွက် Virtual Currency Exchange Provider အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Virtual Currency Exchange Provider License service များကိုအသုံးပြုပါ။
Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Exchange Provider License လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမျှထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ ရန် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ၏ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေး၍ ဂျပန်ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
အီးယူနှင့်ကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူသည်ဂျပန်ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ထောက်ခံမှုပေးသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရလို။ ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Virtual၊ အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံနေသောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပမာ - စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ပစ္စည်း (များ) ကိုမဆိုကမ်းလွန် Virtual Currency Exchange Provider တွင် Virtual Currency Exchange Provider ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်လိုင်စင်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်အင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်ဂျပန်ရဲ့ဖြည့်ချင်သောတိရိစ္ဆာန်များ၏ virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသူလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါဘူး ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်သလို၊ ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်မှာ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား ဂျပန်နှင့် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဂျပန်၌အကြှနျုပျတို့၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ဂျပန်ကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကို EU နှင့် Offshore cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံသည်နျူကလီးယားပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအဖွဲ့အစည်းများအားကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိ၊
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးအပ်သည့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဂျပန်`sဖြည့်ချင်တယ် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူး ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးပါဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
Crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်၌ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား ဂျပန်နှင့် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ဂျပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
Virtual Currency Exchange Provider Crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောမည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမှပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ်သီးပုဂ္ဂလများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီပေးလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုအီးယူနှင့်ကမ်းလွန် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးအပ်သည့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ပေးအပ်သည့် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဂျပန်`sဖြည့်ချင်တယ် crypto လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျပန်တွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါဘူး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးပါဘူး။ ဂျပန်၏ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလည်းမပြုပါ။
Crypto လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်၌ crypto လိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ crypto လိုင်စင်လျှောက်ထား ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် crypto လိုင်စင်ဂျပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto လိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ crypto လိုင်စင်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Genetic material လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Japan တွင် crypto လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore crypto လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျပန်ကမ်းလွန် crypto လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လည်းမဟုတ်ပါ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအတွက်အသုံးပြုသောတိရိစ္ဆာန်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုနှင့်ဂျပန်`sဖြည့်ချင်တယ် crypto လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျပန်တွင် crypto လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသည့်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
Japan ရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်သလို၊ ဂျပန်၏ crypto လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ blockchain လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွက်အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလည်းထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
Blockchain လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ လုပ်လိုသောကန်ထရိုက်စစ်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Japan တွင် blockchain လိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ကိုဂျပန်နိုင်ငံ၏ blockchain လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ blockchain လိုင်စင်လျှောက်ထား Japan နှင့် blockchain လိုင်စင် Japan တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ blockchain လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Virtual Currency Exchange Provider Blockchain လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ blockchain လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားဂျပန်နိုင်ငံသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ blockchain လိုင်စင်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ၏ Blockchain လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Genetic material လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Japan တွင် blockchain လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offchore blockchain လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျပန်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လည်းမဟုတ်ပါ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ blockchain လိုင်စင်ဖြင့်ကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သော blockchain လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသိပ္ပံနည်းကျအတွက်အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Japan`s ဖြည့်ချင်တယ် blockchain လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူနှင့်ကုမ္ပဏီများအား blockchain လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်တွင်မထောက်ပံ့ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ blockchain လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ blockchain လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
Japan ရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ ဂျပန်၏ blockchain လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ပေးခြင်းမပြုပါ -
Cryptocurrency Exchange အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်မှာ cryptocurrency လဲလှယ်ရ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ cryptocurrency လဲလှယ်ဘို့လျှောက်ထားပါ ဂျပန်နှင့် cryptocurrency လဲလှယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ခွင့်မပြုပါ။ cryptocurrency လဲလှယ်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက် EU နှင့် Offshore cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရလို။ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်သည့်ကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးအပ်သည့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့၌လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Japan`s ဖြည့်ချင်တယ် cryptocurrency လဲလှယ် application ကို.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ cryptocurrency လဲလှယ်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမပေးပါ။ Japan`s cryptocurrency လဲလှယ်ပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူး ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်အတွက်လျှောက်ထား.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်သလို၊ ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်လေးလည်း.
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလည်းမပြုပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်လျှောက်ထား ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဂျပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ
Virtual Currency Exchange Provider ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားဂျပန်နိုင်ငံသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကို Genetic material နှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အီးယူနှင့်ကမ်းလွန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်ရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံသည်နျူကလီးယားပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သည့်ကုမ္ပဏီများအားဂျပန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်တွင်ရှိသောကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်၊
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးသောဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်ပေးအပ်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဂျပန်`sဖြည့်ချင်တယ် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သလို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျပန်သို့ ICO လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလည်းမပြုပါ။
ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ လုပ်လိုသောကန်ထရိုက်စစ်သည်များအား ICO လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွက်လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းမပြုပါ။ ဂျပန်မှာ ICO လိုင်စင်ရယူပါ.
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန် ICO လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ICO လိုင်စင်လျှောက်ထား ဂျပန်နှင့် ICO လိုင်စင်ဂျပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ICO လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရား ၀ င်ပြစ်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အား ICO လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရငွေလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ICO လိုင်စင်ကိုဆည်းပူး ဂျပန်များအတွက်။
Virtual Currency Exchange Provider ဂျပန်နိုင်ငံ ICO လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကို Genetic material နှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Japan ရှိ ICO လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အီးယူနှင့်ကမ်းလွန် ICO လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသော (သို့) အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျပန်ကမ်းလွန် ICO လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လည်းမဟုတ်ပါ ICO လိုင်စင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုနှင့်ဂျပန်`sဖြည့်ချင်တယ် ICO လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ICO လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ICO လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ICO လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် Virtual Currency Exchange Supplier လိုင်စင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးနှင့်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ဂျပန်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License အပြင်အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများနှင့်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။
Forex & Securities မှရောင်းဝယ်သူများလိုင်စင်များ
ICO နှင့် Crypto Setup များ
*မှတ်စု : ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မပါ ၀ င်သောလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မျှော်လင့်ပါ ဆက်သွယ်ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
*မှတ်စု : ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ထမ်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားသောအခါဂျပန်၌လိုင်စင်ဖြင့်စတင်သော်လည်းကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးသော်လည်းဂျပန်တွင် HR အထောက်အပံ့ကိုတိုးချဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto валютаလဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီများအတွက် ဂျပန်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး crypto လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး blockchain လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အကောင်းဆုံး l ဂျပန်တွင် blockchain လိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေး၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ n၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်နှင့်အတူ၊
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်အတွက်ပေးသောအခြားဝန်ဆောင်မှု
နှစ်ပေါင်းများစွာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ။
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဂျပန်နှင့် 108 နိုင်ငံများအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် ဂျပန်နှင့် 108 နိုင်ငံများတွင်ဖွင့်လှစ်။
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူဂျပန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်ရန်။
အပြင် Forex လိုင်စင်အပြင်ငါတို့လည်းပေး virtual လိပ်စာ ကမ္ဘာအနှံ့လှပသောနေရာ ၆၆ ခုမှရွေးချယ်ရန်။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Japan တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရကိုယ်စားလှယ်များသည်သင့်အား Japan ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏ Virtual Currency Exchange Provider License အရဂျပန်ရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
Share လိုအပ်ချက် အလုပ်အကိုင်များတင်ပါ
Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပြည့်စုံသောအထောက်အပံ့ဖြင့်ထောက်ပံ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း ဂျပန်မှာ။
အကောင်းဆုံး ဂျပန်အတွက်စာရင်းကိုင် ဂျပန်အတွက်မည်သည့်စာရင်းကိုင်ထောက်ခံမှုများအတွက် 24 *7ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ ဂျပန်နှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်။
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏သော့ချက်ကျသော ၀ န်ထမ်းများအားဂျပန်တွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအတွက်ဂျပန်အတွက်။
Software များနှင့် Web Development
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development Japan နှင့် 109 နိုင်ငံတွင် blockchain, IOT, web, ecommerce နှင့် app များပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအရည်အသွေးအဆင့်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency နှင့်ပိုက်ဆံအိတ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စီမံကိန်းများကို2021ပြီလ ၂၀၂၁ အထိပြီးစီးခဲ့သည်
ဂျပန်၌ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်အတွက်ပညာရှင်လမ်းညွှန်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License လိုင်စင်ရယူခြင်းအတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License
ဂျပန်နိုင်ငံမှ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရအောင်ကူညီပေးနိုင်မလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူပေးသွင်းလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိစေရန်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ပေးသူလိုင်စင်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးနေသည်။
ဂျပန်အတွက် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုလျှောက်ထားပါ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ
ဂျပန်ကနေ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရဖို့ကူညီမလား။
cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းတို့တွင်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
ဂျပန်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ရယူပါ ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား | ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ရယူပါ
ဂျပန်မှ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီပါမလား။
crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းတို့တွင်သင့်အားဂျပန်နိုင်ငံအတွက် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဂျပန်အတွက် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
ဂျပန်မှ crypto လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါမလား။
crypto လိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်ရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဂျပန်တွင် crypto လိုင်စင်ရယူပါ
ဂျပန်မှ blockchain လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါမလား။
blockchain လိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်၏ blockchain လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ဂျပန်အတွက် blockchain လိုင်စင်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
ဂျပန်အတွက် blockchain လိုင်စင်ရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ blockchain လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကနေ cryptocurrency လဲလှယ်အတွက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းသည် Japan ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါက Japan ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်သင်အားကူညီပေးပါမည်။
ဂျပန်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်ရယူပါ ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်ဘို့လျှောက်ထား | ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်ရယူပါ
ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။
ဂျပန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ရယူပါ
ဂျပန်ကနေ ICO လိုင်စင်ရဖို့ကူညီမလား။
ICO လိုင်စင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဂျပန်၏ ICO လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် ICO လိုင်စင်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
ဂျပန်အတွက် ICO လိုင်စင်ကိုရယူပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ICO လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ICO လိုင်စင်ကိုရယူပါ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Virtual Currency Exchange Provider License ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသည့်စီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Virtual Currency Exchange Provider လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည် Virtual Currency Exchange Exchange Provider လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ဂျပန်၊ ဂျပန်ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လည်းဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလည်းလူသိများတဲ့ Japan မှာဘယ်လို cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရနိုင်မလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သော cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်, ဂျပန်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်။ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
သင့်ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုရယူပါ | သင့်ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
Japan တွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်တွင်ဘယ်လိုရနိုင်ပါသလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သည့် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိအစိုးရအခကြေးငွေများ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
သင်၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ သင်၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်တွင်ရယူပါ
Japan တွင် crypto လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ crypto လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်, ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ, crypto အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီပေးပါသည်။
သင့်ရဲ့ crypto လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ သင်၏ crypto လိုင်စင်ကို Japan တွင်ရယူပါ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ blockchain လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သော blockchain လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဂျပန်ရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ blockchain အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သင့်တော်သောအခကြေးငွေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ blockchain လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
သင်၏ blockchain လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ သင်၏ blockchain လိုင်စင်ကို Japan တွင်ရယူပါ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုလည်းဂျပန်မှာဘယ်လိုသိသနည်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်, ဂျပန်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ, cryptocurrency အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လဲလှယ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
သင့်ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်ရယူပါ။ | သင့်ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်ဝယ်ယူပါ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒီဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ ဂျပန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ဂျပန်မှာ ICO လိုင်စင်ကိုဂျပန်မှာ ICO လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ICO လိုင်စင်ရရှိရန်သင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်ကူညီနိုင်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ, ICO အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိုင်စင်ရှိပြီး ICO လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သမျှသက်သာစွာဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဂျပန်မှာမင်းရဲ့ ICO လိုင်စင်ကိုရယူပါ သင်၏ ICO လိုင်စင်ကိုဂျပန်တွင်ရယူပါ
သင်၏ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ သင်၏ Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ
Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရယူပါ ဆက်သွယ်ရန်
Virtual Currency Exchange Provider License ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူကိုလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသည့်စီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်ဂျပန်ရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လည်းဂျပန်၏ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်ကူညီပေးပါသည်။
ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူခြင်းဟုလည်းလူသိများသောဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူမည်နည်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောလိုအပ်သော cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်, ဂျပန်အတွက် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဂျပန်ရှိ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်နှင့်လည်းတတ်နိုင်အခကြေးငွေမှာဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံနှင့်လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ကူညီနိုင်လျှင်ကူညီနိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လည်းကောင်း၊ တတ်နိုင်သောနှုန်းထားများဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရရှိခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်, ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်, ဂျပန်အတွက် crypto လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ, crypto လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် ဂျပန်နှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေမှာဂျပန်၏ crypto လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ crypto လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ crypto လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်ရယူခြင်းဟုလည်းလူသိများသောဂျပန်တွင် blockchain လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ blockchain လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော blockchain လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်လျှင်ဂျပန်ကို blockchain လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိ blockchain လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်သင့်တော်သောအခကြေးငွေဖြင့် blockchain လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ blockchain လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ blockchain လိုင်စင်ကိုဂျပန်တွင်ရယူခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံတွင်သိရှိခြင်း၊
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောလိုအပ်သော cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ဂျပန်ကို cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ cryptocurrency exchange ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရယူပါ ငါ့ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုဂျပန်မှာရယူခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်၊ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဂျပန်မှာ ICO လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ICO လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည် ဂျပန်နှင့် ICO လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ICO လိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ ICO လိုင်စင်ကိုဂျပန်တွင်ရယူခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ဂျပန်၌ရှိသော Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်ကိုရယူပါ ကျွန်တော့်ရဲ့ Virtual Currency Exchange ပေးသူလိုင်စင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရပါတယ်
Virtual Currency Exchange Provider License ကိုရယူပါ ဆက်သွယ်ရန်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခကြေးငွေကဘာလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Japan Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်သူလိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းလူသိများသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
ဂျပန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းအပိုင်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများဟုလည်းလူသိများသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
ဂျပန်စာ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကြေး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ crypto လဲလှယ်လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းသိကြသောဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်ကဘယ်လောက်လဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ crypto လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းအပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ crypto လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများဟုလည်းလူသိများသောဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
Japan blockchain လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Japan တွင် blockchain လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်ခ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ Japan တွင် blockchain လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Blockchain လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းအတွက်အခကြေးငွေများဟုလည်းလူသိများသော Japan တွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်၏အခကြေးငွေ | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်၌ cryptocurrency လဲလှယ်၏အခကြေးငွေ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ခ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်ခ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများဟုလည်းလူသိများသောဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
ကုန်ကျစရိတ်ဂျပန် ICO လိုင်စင်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်ခ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏အခကြေးငွေများ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်ခ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License ၏ကုန်ကျစရိတ် | ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Virtual Currency Exchange Provider License အတွက်အခကြေးငွေများ
Virtual Currency Exchange Provider License အတွက်အခကြေးငွေများ ဆက်သွယ်ရန်
အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ - ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest cryptocurrency exchange license advisors Japan, cheapest services for cryptocurrency exchange license Japan, law firms for cryptocurrency exchange license Japan, acquire cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license advisors Japan, cryptocurrency exchange license Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange license service, cheapest cryptocurrency exchange license lawyers Japan, affordable international cryptocurrency exchange license Japan, cryptocurrency exchange license consultants Japan, affordable cryptocurrency exchange license lawyers Japan, best services for cryptocurrency exchange license Japan, affordable cryptocurrency exchange license attorneys Japan, top cryptocurrency exchange license consultants Japan, top cryptocurrency exchange license advisors Japan, apply for cryptocurrency exchange license Japan, cryptocurrency exchange license advisors Japan, required documents for cryptocurrency exchange license Japan, procedure for cryptocurrency exchange license Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange license law firm, how to get cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license lawyers Japan, license obtaining services for cryptocurrency exchange license Japan, cryptocurrency exchange license fees Japan, top consultants for cryptocurrency exchange license Japan, documents required for cryptocurrency exchange license Japan, cheapest law firms for cryptocurrency exchange license Japan, cheapest cryptocurrency exchange license attorneys Japan, offshore cryptocurrency exchange license, obtaining cryptocurrency exchange license Japan, cryptocurrency exchange license Japan, affordable law firms for cryptocurrency exchange license Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange license consultant, fees cryptocurrency exchange license Japan, process of cryptocurrency exchange license Japan, cryptocurrency exchange license services Japan, best consultants for cryptocurrency exchange license Japan, cheap cryptocurrency exchange license Japan, financial services licensing cryptocurrency exchange license Japan, best cryptocurrency exchange license consultants Japan, application for cryptocurrency exchange license Japan, Japan best cryptocurrency exchange license lawyer, cheapest cryptocurrency exchange license consultants Japan, top cryptocurrency exchange license attorneys Japan, cryptocurrency exchange license lawyers Japan, top law firms for cryptocurrency exchange license Japan, cheapest lawyers for cryptocurrency exchange license Japan, best cryptocurrency exchange license law firms Japan, cryptocurrency exchange license attorneys Japan, instant cryptocurrency exchange license Japan, cheapest cryptocurrency exchange license advisors Japan, cheapest advisors for cryptocurrency exchange license Japan, Japan best cryptocurrency exchange license advisor, top advisors for cryptocurrency exchange license Japan, affordable cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license law firms Japan, best cryptocurrency exchange license consultants Japan, top law firms for cryptocurrency exchange license Japan, cheapest cryptocurrency exchange license law firms Japan, top cryptocurrency exchange license services Japan, Japan best cryptocurrency exchange license consultant, Japan cheapest cryptocurrency exchange license advisor, Japan top cryptocurrency exchange license service, best lawyers for cryptocurrency exchange license Japan, how to apply for cryptocurrency exchange license Japan, top services for cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license services Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange license lawyer, get cryptocurrency exchange license Japan, best law firms for cryptocurrency exchange license Japan, Japan top cryptocurrency exchange license advisor, top cryptocurrency exchange license Japan, affordable cryptocurrency exchange license advisors Japan, low cost cryptocurrency exchange license Japan, cheapest cryptocurrency exchange license Japan, cheapest consultants for cryptocurrency exchange license Japan, license obtaining services for cryptocurrency exchange license Japan, how to acquire cryptocurrency exchange license Japan, Japan best cryptocurrency exchange license law firm, how to obtain cryptocurrency exchange license Japan, cheapest cryptocurrency exchange license lawyers Japan, cheapest cryptocurrency exchange license services Japan, top international cryptocurrency exchange license Japan, international cryptocurrency exchange license Japan, Japan best cryptocurrency exchange license service, Japan top cryptocurrency exchange license law firm, best cryptocurrency exchange license advisors Japan, top lawyers for cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license lawyers Japan, Japan top cryptocurrency exchange license lawyer, best advisors for cryptocurrency exchange license Japan, online cryptocurrency exchange license Japan, best cryptocurrency exchange license Japan, Japan top cryptocurrency exchange license consultant, obtain cryptocurrency exchange license Japan, features of Japan cryptocurrency exchange license, best cryptocurrency exchange license lawyers Japan, cryptocurrency exchange license cost Japan, cost cryptocurrency exchange license Japan, affordable cryptocurrency exchange license services Japan, cheapest cryptocurrency exchange license consultants Japan, best cryptocurrency exchange license services Japan, cheapest international cryptocurrency exchange license Japan, affordable cryptocurrency exchange license consultants Japan, licensing services for Japan cryptocurrency exchange license, cheapest cryptocurrency exchange license services Japan, offshore cryptocurrency exchange license Japan, cheapest law firms for cryptocurrency exchange license Japan, top cryptocurrency exchange license consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest crypto exchange license advisors Japan, cheapest services for crypto exchange license Japan, law firms for crypto exchange license Japan, acquire crypto exchange license Japan, top crypto exchange license advisors Japan, crypto exchange license Japan, Japan cheapest crypto exchange license service, cheapest crypto exchange license lawyers Japan, affordable international crypto exchange license Japan, crypto exchange license consultants Japan, affordable crypto exchange license lawyers Japan, best services for crypto exchange license Japan, affordable crypto exchange license attorneys Japan, top crypto exchange license consultants Japan, top crypto exchange license advisors Japan, apply for crypto exchange license Japan, crypto exchange license advisors Japan, required documents for crypto exchange license Japan, procedure for crypto exchange license Japan, Japan cheapest crypto exchange license law firm, how to get crypto exchange license Japan, top crypto exchange license lawyers Japan, license obtaining services for crypto exchange license Japan, crypto exchange license fees Japan, top consultants for crypto exchange license Japan, documents required for crypto exchange license Japan, cheapest law firms for crypto exchange license Japan, cheapest crypto exchange license attorneys Japan, offshore crypto exchange license, obtaining crypto exchange license Japan, crypto exchange license Japan, affordable law firms for crypto exchange license Japan, Japan cheapest crypto exchange license consultant, fees crypto exchange license Japan, process of crypto exchange license Japan, crypto exchange license services Japan, best consultants for crypto exchange license Japan, cheap crypto exchange license Japan, financial services licensing crypto exchange license Japan, best crypto exchange license consultants Japan, application for crypto exchange license Japan, Japan best crypto exchange license lawyer, cheapest crypto exchange license consultants Japan, top crypto exchange license attorneys Japan, crypto exchange license lawyers Japan, top law firms for crypto exchange license Japan, cheapest lawyers for crypto exchange license Japan, best crypto exchange license law firms Japan, crypto exchange license attorneys Japan, instant crypto exchange license Japan, cheapest crypto exchange license advisors Japan, cheapest advisors for crypto exchange license Japan, Japan best crypto exchange license advisor, top advisors for crypto exchange license Japan, affordable crypto exchange license Japan, top crypto exchange license law firms Japan, best crypto exchange license consultants Japan, top law firms for crypto exchange license Japan, cheapest crypto exchange license law firms Japan, top crypto exchange license services Japan, Japan best crypto exchange license consultant, Japan cheapest crypto exchange license advisor, Japan top crypto exchange license service, best lawyers for crypto exchange license Japan, how to apply for crypto exchange license Japan, top services for crypto exchange license Japan, top crypto exchange license services Japan, Japan cheapest crypto exchange license lawyer, get crypto exchange license Japan, best law firms for crypto exchange license Japan, Japan top crypto exchange license advisor, top crypto exchange license Japan, affordable crypto exchange license advisors Japan, low cost crypto exchange license Japan, cheapest crypto exchange license Japan, cheapest consultants for crypto exchange license Japan, license obtaining services for crypto exchange license Japan, how to acquire crypto exchange license Japan, Japan best crypto exchange license law firm, how to obtain crypto exchange license Japan, cheapest crypto exchange license lawyers Japan, cheapest crypto exchange license services Japan, top international crypto exchange license Japan, international crypto exchange license Japan, Japan best crypto exchange license service, Japan top crypto exchange license law firm, best crypto exchange license advisors Japan, top lawyers for crypto exchange license Japan, top crypto exchange license lawyers Japan, Japan top crypto exchange license lawyer, best advisors for crypto exchange license Japan, online crypto exchange license Japan, best crypto exchange license Japan, Japan top crypto exchange license consultant, obtain crypto exchange license Japan, features of Japan crypto exchange license, best crypto exchange license lawyers Japan, crypto exchange license cost Japan, cost crypto exchange license Japan, affordable crypto exchange license services Japan, cheapest crypto exchange license consultants Japan, best crypto exchange license services Japan, cheapest international crypto exchange license Japan, affordable crypto exchange license consultants Japan, licensing services for Japan crypto exchange license, cheapest crypto exchange license services Japan, offshore crypto exchange license Japan, cheapest law firms for crypto exchange license Japan, top crypto exchange license consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest crypto license advisors Japan, cheapest services for crypto license Japan, law firms for crypto license Japan, acquire crypto license Japan, top crypto license advisors Japan, crypto license Japan, Japan cheapest crypto license service, cheapest crypto license lawyers Japan, affordable international crypto license Japan, crypto license consultants Japan, affordable crypto license lawyers Japan, best services for crypto license Japan, affordable crypto license attorneys Japan, top crypto license consultants Japan, top crypto license advisors Japan, apply for crypto license Japan, crypto license advisors Japan, required documents for crypto license Japan, procedure for crypto license Japan, Japan cheapest crypto license law firm, how to get crypto license Japan, top crypto license lawyers Japan, license obtaining services for crypto license Japan, crypto license fees Japan, top consultants for crypto license Japan, documents required for crypto license Japan, cheapest law firms for crypto license Japan, cheapest crypto license attorneys Japan, offshore crypto license, obtaining crypto license Japan, crypto license Japan, affordable law firms for crypto license Japan, Japan cheapest crypto license consultant, fees crypto license Japan, process of crypto license Japan, crypto license services Japan, best consultants for crypto license Japan, cheap crypto license Japan, financial services licensing crypto license Japan, best crypto license consultants Japan, application for crypto license Japan, Japan best crypto license lawyer, cheapest crypto license consultants Japan, top crypto license attorneys Japan, crypto license lawyers Japan, top law firms for crypto license Japan, cheapest lawyers for crypto license Japan, best crypto license law firms Japan, crypto license attorneys Japan, instant crypto license Japan, cheapest crypto license advisors Japan, cheapest advisors for crypto license Japan, Japan best crypto license advisor, top advisors for crypto license Japan, affordable crypto license Japan, top crypto license law firms Japan, best crypto license consultants Japan, top law firms for crypto license Japan, cheapest crypto license law firms Japan, top crypto license services Japan, Japan best crypto license consultant, Japan cheapest crypto license advisor, Japan top crypto license service, best lawyers for crypto license Japan, how to apply for crypto license Japan, top services for crypto license Japan, top crypto license services Japan, Japan cheapest crypto license lawyer, get crypto license Japan, best law firms for crypto license Japan, Japan top crypto license advisor, top crypto license Japan, affordable crypto license advisors Japan, low cost crypto license Japan, cheapest crypto license Japan, cheapest consultants for crypto license Japan, license obtaining services for crypto license Japan, how to acquire crypto license Japan, Japan best crypto license law firm, how to obtain crypto license Japan, cheapest crypto license lawyers Japan, cheapest crypto license services Japan, top international crypto license Japan, international crypto license Japan, Japan best crypto license service, Japan top crypto license law firm, best crypto license advisors Japan, top lawyers for crypto license Japan, top crypto license lawyers Japan, Japan top crypto license lawyer, best advisors for crypto license Japan, online crypto license Japan, best crypto license Japan, Japan top crypto license consultant, obtain crypto license Japan, features of Japan crypto license, best crypto license lawyers Japan, crypto license cost Japan, cost crypto license Japan, affordable crypto license services Japan, cheapest crypto license consultants Japan, best crypto license services Japan, cheapest international crypto license Japan, affordable crypto license consultants Japan, licensing services for Japan crypto license, cheapest crypto license services Japan, offshore crypto license Japan, cheapest law firms for crypto license Japan, top crypto license consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest blockchain license advisors Japan, cheapest services for blockchain license Japan, law firms for blockchain license Japan, acquire blockchain license Japan, top blockchain license advisors Japan, blockchain license Japan, Japan cheapest blockchain license service, cheapest blockchain license lawyers Japan, affordable international blockchain license Japan, blockchain license consultants Japan, affordable blockchain license lawyers Japan, best services for blockchain license Japan, affordable blockchain license attorneys Japan, top blockchain license consultants Japan, top blockchain license advisors Japan, apply for blockchain license Japan, blockchain license advisors Japan, required documents for blockchain license Japan, procedure for blockchain license Japan, Japan cheapest blockchain license law firm, how to get blockchain license Japan, top blockchain license lawyers Japan, license obtaining services for blockchain license Japan, blockchain license fees Japan, top consultants for blockchain license Japan, documents required for blockchain license Japan, cheapest law firms for blockchain license Japan, cheapest blockchain license attorneys Japan, offshore blockchain license, obtaining blockchain license Japan, blockchain license Japan, affordable law firms for blockchain license Japan, Japan cheapest blockchain license consultant, fees blockchain license Japan, process of blockchain license Japan, blockchain license services Japan, best consultants for blockchain license Japan, cheap blockchain license Japan, financial services licensing blockchain license Japan, best blockchain license consultants Japan, application for blockchain license Japan, Japan best blockchain license lawyer, cheapest blockchain license consultants Japan, top blockchain license attorneys Japan, blockchain license lawyers Japan, top law firms for blockchain license Japan, cheapest lawyers for blockchain license Japan, best blockchain license law firms Japan, blockchain license attorneys Japan, instant blockchain license Japan, cheapest blockchain license advisors Japan, cheapest advisors for blockchain license Japan, Japan best blockchain license advisor, top advisors for blockchain license Japan, affordable blockchain license Japan, top blockchain license law firms Japan, best blockchain license consultants Japan, top law firms for blockchain license Japan, cheapest blockchain license law firms Japan, top blockchain license services Japan, Japan best blockchain license consultant, Japan cheapest blockchain license advisor, Japan top blockchain license service, best lawyers for blockchain license Japan, how to apply for blockchain license Japan, top services for blockchain license Japan, top blockchain license services Japan, Japan cheapest blockchain license lawyer, get blockchain license Japan, best law firms for blockchain license Japan, Japan top blockchain license advisor, top blockchain license Japan, affordable blockchain license advisors Japan, low cost blockchain license Japan, cheapest blockchain license Japan, cheapest consultants for blockchain license Japan, license obtaining services for blockchain license Japan, how to acquire blockchain license Japan, Japan best blockchain license law firm, how to obtain blockchain license Japan, cheapest blockchain license lawyers Japan, cheapest blockchain license services Japan, top international blockchain license Japan, international blockchain license Japan, Japan best blockchain license service, Japan top blockchain license law firm, best blockchain license advisors Japan, top lawyers for blockchain license Japan, top blockchain license lawyers Japan, Japan top blockchain license lawyer, best advisors for blockchain license Japan, online blockchain license Japan, best blockchain license Japan, Japan top blockchain license consultant, obtain blockchain license Japan, features of Japan blockchain license, best blockchain license lawyers Japan, blockchain license cost Japan, cost blockchain license Japan, affordable blockchain license services Japan, cheapest blockchain license consultants Japan, best blockchain license services Japan, cheapest international blockchain license Japan, affordable blockchain license consultants Japan, licensing services for Japan blockchain license, cheapest blockchain license services Japan, offshore blockchain license Japan, cheapest law firms for blockchain license Japan, top blockchain license consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest cryptocurrency exchange advisors Japan, cheapest services for cryptocurrency exchange Japan, law firms for cryptocurrency exchange Japan, acquire cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange advisors Japan, cryptocurrency exchange Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange service, cheapest cryptocurrency exchange lawyers Japan, affordable international cryptocurrency exchange Japan, cryptocurrency exchange consultants Japan, affordable cryptocurrency exchange lawyers Japan, best services for cryptocurrency exchange Japan, affordable cryptocurrency exchange attorneys Japan, top cryptocurrency exchange consultants Japan, top cryptocurrency exchange advisors Japan, apply for cryptocurrency exchange Japan, cryptocurrency exchange advisors Japan, required documents for cryptocurrency exchange Japan, procedure for cryptocurrency exchange Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange law firm, how to get cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange lawyers Japan, license obtaining services for cryptocurrency exchange Japan, cryptocurrency exchange fees Japan, top consultants for cryptocurrency exchange Japan, documents required for cryptocurrency exchange Japan, cheapest law firms for cryptocurrency exchange Japan, cheapest cryptocurrency exchange attorneys Japan, offshore cryptocurrency exchange, obtaining cryptocurrency exchange Japan, cryptocurrency exchange Japan, affordable law firms for cryptocurrency exchange Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange consultant, fees cryptocurrency exchange Japan, process of cryptocurrency exchange Japan, cryptocurrency exchange services Japan, best consultants for cryptocurrency exchange Japan, cheap cryptocurrency exchange Japan, financial services licensing cryptocurrency exchange Japan, best cryptocurrency exchange consultants Japan, application for cryptocurrency exchange Japan, Japan best cryptocurrency exchange lawyer, cheapest cryptocurrency exchange consultants Japan, top cryptocurrency exchange attorneys Japan, cryptocurrency exchange lawyers Japan, top law firms for cryptocurrency exchange Japan, cheapest lawyers for cryptocurrency exchange Japan, best cryptocurrency exchange law firms Japan, cryptocurrency exchange attorneys Japan, instant cryptocurrency exchange Japan, cheapest cryptocurrency exchange advisors Japan, cheapest advisors for cryptocurrency exchange Japan, Japan best cryptocurrency exchange advisor, top advisors for cryptocurrency exchange Japan, affordable cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange law firms Japan, best cryptocurrency exchange consultants Japan, top law firms for cryptocurrency exchange Japan, cheapest cryptocurrency exchange law firms Japan, top cryptocurrency exchange services Japan, Japan best cryptocurrency exchange consultant, Japan cheapest cryptocurrency exchange advisor, Japan top cryptocurrency exchange service, best lawyers for cryptocurrency exchange Japan, how to apply for cryptocurrency exchange Japan, top services for cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange services Japan, Japan cheapest cryptocurrency exchange lawyer, get cryptocurrency exchange Japan, best law firms for cryptocurrency exchange Japan, Japan top cryptocurrency exchange advisor, top cryptocurrency exchange Japan, affordable cryptocurrency exchange advisors Japan, low cost cryptocurrency exchange Japan, cheapest cryptocurrency exchange Japan, cheapest consultants for cryptocurrency exchange Japan, license obtaining services for cryptocurrency exchange Japan, how to acquire cryptocurrency exchange Japan, Japan best cryptocurrency exchange law firm, how to obtain cryptocurrency exchange Japan, cheapest cryptocurrency exchange lawyers Japan, cheapest cryptocurrency exchange services Japan, top international cryptocurrency exchange Japan, international cryptocurrency exchange Japan, Japan best cryptocurrency exchange service, Japan top cryptocurrency exchange law firm, best cryptocurrency exchange advisors Japan, top lawyers for cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange lawyers Japan, Japan top cryptocurrency exchange lawyer, best advisors for cryptocurrency exchange Japan, online cryptocurrency exchange Japan, best cryptocurrency exchange Japan, Japan top cryptocurrency exchange consultant, obtain cryptocurrency exchange Japan, features of Japan cryptocurrency exchange, best cryptocurrency exchange lawyers Japan, cryptocurrency exchange cost Japan, cost cryptocurrency exchange Japan, affordable cryptocurrency exchange services Japan, cheapest cryptocurrency exchange consultants Japan, best cryptocurrency exchange services Japan, cheapest international cryptocurrency exchange Japan, affordable cryptocurrency exchange consultants Japan, licensing services for Japan cryptocurrency exchange, cheapest cryptocurrency exchange services Japan, offshore cryptocurrency exchange Japan, cheapest law firms for cryptocurrency exchange Japan, top cryptocurrency exchange consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest digital asset license advisors Japan, cheapest services for digital asset license Japan, law firms for digital asset license Japan, acquire digital asset license Japan, top digital asset license advisors Japan, digital asset license Japan, Japan cheapest digital asset license service, cheapest digital asset license lawyers Japan, affordable international digital asset license Japan, digital asset license consultants Japan, affordable digital asset license lawyers Japan, best services for digital asset license Japan, affordable digital asset license attorneys Japan, top digital asset license consultants Japan, top digital asset license advisors Japan, apply for digital asset license Japan, digital asset license advisors Japan, required documents for digital asset license Japan, procedure for digital asset license Japan, Japan cheapest digital asset license law firm, how to get digital asset license Japan, top digital asset license lawyers Japan, license obtaining services for digital asset license Japan, digital asset license fees Japan, top consultants for digital asset license Japan, documents required for digital asset license Japan, cheapest law firms for digital asset license Japan, cheapest digital asset license attorneys Japan, offshore digital asset license, obtaining digital asset license Japan, digital asset license Japan, affordable law firms for digital asset license Japan, Japan cheapest digital asset license consultant, fees digital asset license Japan, process of digital asset license Japan, digital asset license services Japan, best consultants for digital asset license Japan, cheap digital asset license Japan, financial services licensing digital asset license Japan, best digital asset license consultants Japan, application for digital asset license Japan, Japan best digital asset license lawyer, cheapest digital asset license consultants Japan, top digital asset license attorneys Japan, digital asset license lawyers Japan, top law firms for digital asset license Japan, cheapest lawyers for digital asset license Japan, best digital asset license law firms Japan, digital asset license attorneys Japan, instant digital asset license Japan, cheapest digital asset license advisors Japan, cheapest advisors for digital asset license Japan, Japan best digital asset license advisor, top advisors for digital asset license Japan, affordable digital asset license Japan, top digital asset license law firms Japan, best digital asset license consultants Japan, top law firms for digital asset license Japan, cheapest digital asset license law firms Japan, top digital asset license services Japan, Japan best digital asset license consultant, Japan cheapest digital asset license advisor, Japan top digital asset license service, best lawyers for digital asset license Japan, how to apply for digital asset license Japan, top services for digital asset license Japan, top digital asset license services Japan, Japan cheapest digital asset license lawyer, get digital asset license Japan, best law firms for digital asset license Japan, Japan top digital asset license advisor, top digital asset license Japan, affordable digital asset license advisors Japan, low cost digital asset license Japan, cheapest digital asset license Japan, cheapest consultants for digital asset license Japan, license obtaining services for digital asset license Japan, how to acquire digital asset license Japan, Japan best digital asset license law firm, how to obtain digital asset license Japan, cheapest digital asset license lawyers Japan, cheapest digital asset license services Japan, top international digital asset license Japan, international digital asset license Japan, Japan best digital asset license service, Japan top digital asset license law firm, best digital asset license advisors Japan, top lawyers for digital asset license Japan, top digital asset license lawyers Japan, Japan top digital asset license lawyer, best advisors for digital asset license Japan, online digital asset license Japan, best digital asset license Japan, Japan top digital asset license consultant, obtain digital asset license Japan, features of Japan digital asset license, best digital asset license lawyers Japan, digital asset license cost Japan, cost digital asset license Japan, affordable digital asset license services Japan, cheapest digital asset license consultants Japan, best digital asset license services Japan, cheapest international digital asset license Japan, affordable digital asset license consultants Japan, licensing services for Japan digital asset license, cheapest digital asset license services Japan, offshore digital asset license Japan, cheapest law firms for digital asset license Japan, top digital asset license consultants Japan We have tried to define and provide information for Japan`s licensing services related to cheapest ICO License advisors Japan, cheapest services for ICO License Japan, law firms for ICO License Japan, acquire ICO License Japan, top ICO License advisors Japan, ICO License Japan, Japan cheapest ICO License service, cheapest ICO License lawyers Japan, affordable international ICO License Japan, ICO License consultants Japan, affordable ICO License lawyers Japan, best services for ICO License Japan, affordable ICO License attorneys Japan, top ICO License consultants Japan, top ICO License advisors Japan, apply for ICO License Japan, ICO License advisors Japan, required documents for ICO License Japan, procedure for ICO License Japan, Japan cheapest ICO License law firm, how to get ICO License Japan, top ICO License lawyers Japan, license obtaining services for ICO License Japan, ICO License fees Japan, top consultants for ICO License Japan, documents required for ICO License Japan, cheapest law firms for ICO License Japan, cheapest ICO License attorneys Japan, offshore ICO License, obtaining ICO License Japan, ICO License Japan, affordable law firms for ICO License Japan, Japan cheapest ICO License consultant, fees ICO License Japan, process of ICO License Japan, ICO License services Japan, best consultants for ICO License Japan, cheap ICO License Japan, financial services licensing ICO License Japan, best ICO License consultants Japan, application for ICO License Japan, Japan best ICO License lawyer, cheapest ICO License consultants Japan, top ICO License attorneys Japan, ICO License lawyers Japan, top law firms for ICO License Japan, cheapest lawyers for ICO License Japan, best ICO License law firms Japan, ICO License attorneys Japan, instant ICO License Japan, cheapest ICO License advisors Japan, cheapest advisors for ICO License Japan, Japan best ICO License advisor, top advisors for ICO License Japan, affordable ICO License Japan, top ICO License law firms Japan, best ICO License consultants Japan, top law firms for ICO License Japan, cheapest ICO License law firms Japan, top ICO License services Japan, Japan best ICO License consultant, Japan cheapest ICO License advisor, Japan top ICO License service, best lawyers for ICO License Japan, how to apply for ICO License Japan, top services for ICO License Japan, top ICO License services Japan, Japan cheapest ICO License lawyer, get ICO License Japan, best law firms for ICO License Japan, Japan top ICO License advisor, top ICO License Japan, affordable ICO License advisors Japan, low cost ICO License Japan, cheapest ICO License Japan, cheapest consultants for ICO License Japan, license obtaining services for ICO License Japan, how to acquire ICO License Japan, Japan best ICO License law firm, how to obtain ICO License Japan, cheapest ICO License lawyers Japan, cheapest ICO License services Japan, top international ICO License Japan, international ICO License Japan, Japan best ICO License service, Japan top ICO License law firm, best ICO License advisors Japan, top lawyers for ICO License Japan, top ICO License lawyers Japan, Japan top ICO License lawyer, best advisors for ICO License Japan, online ICO License Japan, best ICO License Japan, Japan top ICO License consultant, obtain ICO License Japan, features of Japan ICO License, best ICO License lawyers Japan, ICO License cost Japan, cost ICO License Japan, affordable ICO License services Japan, cheapest ICO License consultants Japan, best ICO License services Japan, cheapest international ICO License Japan, affordable ICO License consultants Japan, licensing services for Japan ICO License, cheapest ICO License services Japan, offshore ICO License Japan, cheapest law firms for ICO License Japan, top ICO License consultants Japan .
NRW ဂျပန် KK
Chambre de Commerce & စက်မှုလုပ်ငန်းပြင်သစ် (CCIFJ)
ဂျပန်ရှိဘယ်လ်ဂျီယံ - လူဇင်ဘတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BLCCJ)
မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ဂျပန်၏တရားဝင်စာရင်းအင်းများ Portal Site
အီတလီ၊ မက္ကစီကို၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
ပြည်ထဲရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
သြစတြီးယားသံရုံး၊ ကုန်သွယ်ရေးဌာန (Advantage Austria)
စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန (METI)
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
Keidanren - ဂျပန်စီးပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်
အီးယူ - ဂျပန်စက်မှုလက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ
ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်ဂျပန်၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ စရိတ်များ၊
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဘဏ်စာရင်းအောင်မြင်မှုနှုန်းဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးသမားများအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းနိုင်အောင်သင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ် ၄၇၂ ခုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး Cryptocurrency လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးသူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ cryptocurrency အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ ဂျပန်တွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ခ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဂျပန်နိုင်ငံရှိ crypto လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, အကောင်းဆုံး blockchain ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် blockchain လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ အကောင်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျပန်တွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်၊ ဂျပန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ခ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး ICO လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ ဂျပန်ရှိ ICO လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
ဂျပန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည့် Virtual Currency Exchange Provider License: ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် ဂျပန်၏
61390699309 + ပိုလန်
ခွင | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | အသိအမှတ်ပြု | သတ်မှတ်ချက်များ | ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ